Ny fivavahana ao amin' ny Repoblikan' i Kôngô dia ny fivavahan-drazana sy ny fivavahana kristiana ary ny fivavahana silamo. Ny Repoblikan’ i Kôngô dia firenena anjakan’ ny fampifangaroana fivavahana. Mihoatra ny antsasaky ny mponina manontolo no mitonon-tena ho Kristiana. Katôlika ny 35 % hatramin' ny 50 %n’ ny mponina, Prôtestanta ny 15 % hatramin' ny 20 % ary 15 % Kristiana hafa. Ny animisma sy ny fivavahan-drazana dia mbola be mpanaraka ao avaratra (50 %). Any amin’ ny faritry ny hivoka sy amin’ ny tanan-dehibe no ahitana ny fivavahana silamo (2 %).
Ao koa ireo Kristiana vitsy anisa manaka ny kimbangisma, izay fivavahana manambatra fombam-pivavahana sy finoana isan-karazany (sinkretisma) izay nipoitra avy ao amin' ny Repoblika Demôkratikan' i Kôngô mpifanila vodirindrina amin' ny Repoblikan' i Kôngô. Na dia mitazona singa avy amin' ny kristianisma aza ny kimbangisma dia manao an' i Simon Kimbangu ho mpaminany sady mampiditra finoana nentim-paharazana afrikana toy ny fivavahana amin' ny razana.
Momba ny Repoblikan' i Kôngô
Momba ny fivavahana aty Afrika
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Fivavahana_ao_amin%27_ny_Repoblikan%27_i_Kôngô&oldid=1040243"
Dernière modification le 23 Novambra 2021, à 18:41
Voaova farany tamin'ny 23 Novambra 2021 amin'ny 18:41 ity pejy ity.